သင် လေ့လာသမျှ အကုန်မှတ်မိနေစေဖို့ နည်းလမ်း ၄ မျိုး – Gentleman Magazine
သင် လေ့လာသမျှ အကုန်မှတ်မိနေစေဖို့ နည်းလမ်း ၄ မျိုး
သင် လေ့လာသမျှ မှတ်မိဖို့ဆိုရင် ဗဟုသုတ နှစ်မျိုး လိုပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ သင်လေ့လာမယ့် ပညာရပ်အကြောင်းရယ်၊ လေ့လာခြင်းကိုယ်တိုင်ရဲ့ အကြောင်းရယ် တွေပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ ပညာရေးမှာ ကံဆိုးစွာနဲ့ ဒုတိယအချက်ကို မသင်ကြားပေးပါဘူး။ တကယ်တော့ အဲဒါက ပိုအရေးကြီးတာပါ။ အမှတ်နည်းနေတဲ့ ကျောင်းသားတွေကို အဲဒိဒုတိအအချက် သင်ပေးလိုက်ရာမှာ အမှတ်တွေ ထောင်တက်သွားတာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။
ကဲ၊ ဒီမှာ အဲဒိ လေ့လာခြင်းအကြောင်းအတွက် အရေးကြီးတဲ့ လေ့လာနည်းဗျူဟာ လေးမျိုးကို ချပြလိုက်ပါတယ်။
၁. သင့်ကိုယ်သင် မှတ်မိနေဖို့ တွန်းအားပေးပါ
အကျိုးရှိအောင် လေ့လာဖို့ဆိုတာ ခက်ခဲပါတယ်။ အရေးကြီးတာက လေ့လာပြီးသားဟာတွေ ပျောက်မသွားအောင် ထပ်ခါထပ်ခါ လေ့လာရမှာပါ။ အလေးမတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာ အလေးဆက်မမတော့ရင် သူမနိုင်တဲ့ အလေးချိန် လျော့သွားသလိုပါပဲ။ အဲဒိလို ထပ်ခါထပ်ခါ လေ့လာဖို့က လွယ်ပါတယ်။ စာအုပ်လှန်ပြီး ကြုံရာ မေးခွန်းတစ်ခု ပြန်ဖြေကြည့်လိုက်ပါ။
၂. လွယ်တယ်ဆိုပြီး မပေါ့ပါနဲ့
သင် တစ်ခုခုကို ဖတ်နေတယ်၊ အဲဒိလို ဖတ်နေတုန်း လွယ်တယ်ထင်ရရင် သင်အဲဒါ ပေါ့ဆမှုကို ခံစားနေရတာပါပဲ။ ဥပမာ ၊ သင်က လေဆိပ်မှာပါ။ သင်စီးရမယ့် ဂိတ်နံပါတ်က B44 ဆိုတာ မော်နီတာပေါ်မှာ ပြပေးနေပါတယ်။ B44 အဲဒါ လွယ်လွယ်လေးပါကွာ.. အဲလို စဉ်းစားလိုက်မယ်။ ပြီးတော့ ထွက်သွားပြီး Facebook ဝင် ချက်နေမယ်။ ပြီးတော့ သင် ဘယ်သွားရမယ်ဆိုတာ မေ့သွားပါပြီ။
အဲဒိအစား သင် မော်နီတာကို ကျောခိုင်းလိုက်တာနဲ့ ဘယ်ဂိတ်လဲဆိုတာ ပြန်စဉ်းစားလိုက်ပါ။ သင် အဲဒါ B44 ဆိုတာ မှတ်မိရင် သွားလို့ရပါပြီ။ လေ့လာရင်လည်း စာအုပ်ပိတ်ပြီး ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါ။ မှတ်မိရင် OK ပါပြီ။
၃. အသစ်တွေနဲ့ အဟောင်းတွေ ဆက်စပ်စဉ်းစားပါ
သင့်ရဲ့ ပညာအသစ်တွေကို ရှင်းပြနိုင်ဖို့က အတိတ်မှာ သင်ယူခဲ့တာတွေနဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။ သင် ပညာအသစ်ကို တတ်ကျွမ်းလေလေ အဲဒါကို ပြန်သတိရဖို့ အထောက်အကူပြုမယ့် အဆက်အစပ်တွေကို ပိုပြီး တွေ့လာရလေလေပါ။
အဲဒိမှာ အဆင်ပြေတဲ့ နည်းတစ်ခုက သင်ကြားရတဲ့ အရာတွေကို နေ့စဉ်ဘဝထဲကဟာတွေနဲ့ ဆက်စပ်မှတ်ထားခြင်းပါပဲ။ လေးလုံးစပ်ကာရန်ကို သင်ရရင် မဂ္ဂဇင်းတွေထဲမှာ တွေ့ရတဲ့ ကဗျာတွေနဲ့ တွဲမှတ်ထားမယ်၊ အပူကူးခြင်းအကြောင်းကို ဆောင်းတွင်းမှာ ကော်ဖီတစ်ခွက်ကို ကိုင်လိုက်ရင် သင့်လက်တွေ နွေးသွားပုံနဲ့ နှိုင်းယှဉ် စဉ်းစားနိုင်ပါတယ်
ပြန်ပြန်ကြည့်တာ တကယ်အကျိုးရှိပါတယ်။ ဟားဗတ်တက္ကသိုလ် စစ်တမ်းတစ်ခုမှာ ဆရာတွေနဲ့ အမြဲ အနီးကပ်နေနေတဲ့ ကျောင်းသားတွေဟာ တစ်နေ့လုံးသင်ရသမျှစာကို ညဘက်မှာ ၁၅ မိနစ်လောက်ပဲ ပြန်လေ့လာသူတွေထက် ၂၂.၈ ရာနှုန်းပဲ အမှတ်ပိုများတာကို တွေ့ရပါတယ်။
လူတွေဟာ ပြန်ပြန် လေ့လာနေရင် သင်ယူလေ့လာရတာ ပိုမြန်ဆန်စေပါတယ်။ သူတို့ စာရတာကို တွေ့လိုက်တိုင်း ကိုယ့်ဘာသာ ယုံကြည်ချက် တိုးမြင့်စေပါတယ်။ အကျိုးဆက်အနေနဲ့ သူတို့ စာသင်ရတာ ပိုအားရှိလာပြီး ပိုများများ သင်ယူလာနိုင်ပါတယ်။
ပြန်ပြန်လေ့လာတာဟာ အလုပ်နည်းနည်းပဲ လုပ်ရပြီး အကျိုး အများကြီး ရတဲ့ဟာပါ။
သငျ လလေ့ာသမြှ အကုနျမှတျမိနစေဖေို့ နညျးလမျး ၄ မြိုး
သငျ လလေ့ာသမြှ မှတျမိဖို့ဆိုရငျ ဗဟုသုတ နှဈမြိုး လိုပါတယျ။ အဲဒါတှကေတော့ သငျလလေ့ာမယျ့ ပညာရပျအကွောငျးရယျ၊ လလေ့ာခွငျးကိုယျတိုငျရဲ့ အကွောငျးရယျ တှပေါပဲ။ ကြှနျတျောတို့ ပညာရေးမှာ ကံဆိုးစှာနဲ့ ဒုတိယအခကျြကို မသငျကွားပေးပါဘူး။ တကယျတော့ အဲဒါက ပိုအရေးကွီးတာပါ။ အမှတျနညျးနတေဲ့ ကြောငျးသားတှကေို အဲဒိဒုတိအအခကျြ သငျပေးလိုကျရာမှာ အမှတျတှေ ထောငျတကျသှားတာကို တှရှေိ့ရပါတယျ။
ကဲ၊ ဒီမှာ အဲဒိ လလေ့ာခွငျးအကွောငျးအတှကျ အရေးကွီးတဲ့ လလေ့ာနညျးဗြူဟာ လေးမြိုးကို ခပြွလိုကျပါတယျ။
၁. သငျ့ကိုယျသငျ မှတျမိနဖေို့ တှနျးအားပေးပါ
အကြိုးရှိအောငျ လလေ့ာဖို့ဆိုတာ ခကျခဲပါတယျ။ အရေးကွီးတာက လလေ့ာပွီးသားဟာတှေ ပြောကျမသှားအောငျ ထပျခါထပျခါ လလေ့ာရမှာပါ။ အလေးမတဲ့လူတဈယောကျဟာ အလေးဆကျမမတော့ရငျ သူမနိုငျတဲ့ အလေးခြိနျ လြော့သှားသလိုပါပဲ။ အဲဒိလို ထပျခါထပျခါ လလေ့ာဖို့က လှယျပါတယျ။ စာအုပျလှနျပွီး ကွုံရာ မေးခှနျးတဈခု ပွနျဖွကွေညျ့လိုကျပါ။
၂. လှယျတယျဆိုပွီး မပေါ့ပါနဲ့
သငျ တဈခုခုကို ဖတျနတေယျ၊ အဲဒိလို ဖတျနတေုနျး လှယျတယျထငျရရငျ သငျအဲဒါ ပေါ့ဆမှုကို ခံစားနရေတာပါပဲ။ ဥပမာ ၊ သငျက လဆေိပျမှာပါ။ သငျစီးရမယျ့ ဂိတျနံပါတျက B44 ဆိုတာ မျောနီတာပျေါမှာ ပွပေးနပေါတယျ။ B44 အဲဒါ လှယျလှယျလေးပါကှာ.. အဲလို စဉျးစားလိုကျမယျ။ ပွီးတော့ ထှကျသှားပွီး Facebook ဝငျ ခကျြနမေယျ။ ပွီးတော့ သငျ ဘယျသှားရမယျဆိုတာ မသှေ့ားပါပွီ။
အဲဒိအစား သငျ မျောနီတာကို ကြောခိုငျးလိုကျတာနဲ့ ဘယျဂိတျလဲဆိုတာ ပွနျစဉျးစားလိုကျပါ။ သငျ အဲဒါ B44 ဆိုတာ မှတျမိရငျ သှားလို့ရပါပွီ။ လလေ့ာရငျလညျး စာအုပျပိတျပွီး ပွနျစဉျးစားကွညျ့ပါ။ မှတျမိရငျ OK ပါပွီ။
၃. အသဈတှနေဲ့ အဟောငျးတှေ ဆကျစပျစဉျးစားပါ
သငျ့ရဲ့ ပညာအသဈတှကေို ရှငျးပွနိုငျဖို့က အတိတျမှာ သငျယူခဲ့တာတှနေဲ့ ဆကျစပျနပေါတယျ။ သငျ ပညာအသဈကို တတျကြှမျးလလေေ အဲဒါကို ပွနျသတိရဖို့ အထောကျအကူပွုမယျ့ အဆကျအစပျတှကေို ပိုပွီး တှလေ့ာရလလေပေါ။
အဲဒိမှာ အဆငျပွတေဲ့ နညျးတဈခုက သငျကွားရတဲ့ အရာတှကေို နစေ့ဉျဘဝထဲကဟာတှနေဲ့ ဆကျစပျမှတျထားခွငျးပါပဲ။ လေးလုံးစပျကာရနျကို သငျရရငျ မဂ်ဂဇငျးတှထေဲမှာ တှရေ့တဲ့ ကဗြာတှနေဲ့ တှဲမှတျထားမယျ၊ အပူကူးခွငျးအကွောငျးကို ဆောငျးတှငျးမှာ ကျောဖီတဈခှကျကို ကိုငျလိုကျရငျ သငျ့လကျတှေ နှေးသှားပုံနဲ့ နှိုငျးယှဉျ စဉျးစားနိုငျပါတယျ။
ပွနျပွနျကွညျ့တာ တကယျအကြိုးရှိပါတယျ။ ဟားဗတျတက်ကသိုလျ စဈတမျးတဈခုမှာ ဆရာတှနေဲ့ အမွဲ အနီးကပျနနေတေဲ့ ကြောငျးသားတှဟော တဈနလေုံ့းသငျရသမြှစာကို ညဘကျမှာ ၁၅ မိနဈလောကျပဲ ပွနျလလေ့ာသူတှထေကျ ၂၂.၈ ရာနှုနျးပဲ အမှတျပိုမြားတာကို တှရေ့ပါတယျ။
လူတှဟော ပွနျပွနျ လလေ့ာနရေငျ သငျယူလလေ့ာရတာ ပိုမွနျဆနျစပေါတယျ။ သူတို့ စာရတာကို တှလေို့ကျတိုငျး ကိုယျ့ဘာသာ ယုံကွညျခကျြ တိုးမွငျ့စပေါတယျ။ အကြိုးဆကျအနနေဲ့ သူတို့ စာသငျရတာ ပိုအားရှိလာပွီး ပိုမြားမြား သငျယူလာနိုငျပါတယျ။
ပွနျပွနျလလေ့ာတာဟာ အလုပျနညျးနညျးပဲ လုပျရပွီး အကြိုး အမြားကွီး ရတဲ့ဟာပါ။
Previous: သင့်ကို မိန်းကလေးတွေ သိစေချင်ဆုံး အရာ ၁၀ ခု
Next: သင် သူတစ်ပါးကို ကူညီသင့်တဲ့ အကြောင်းရင်း